Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » A kwadebere Boeing 737 MAX ka ọ fega na mbara ikuku India ọzọ
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • India na -agbasa ozi ọma • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ka ọ dị ugbu a, mba 175 n'ime mba 195 buliri ihe mgbochi na Max, ihe karịrị ndị ọrụ 30 eweghachila ụgbọ elu ahụ ka ọ rụọ ọrụ.
Onye na -ahụ maka ụgbọ elu ndị India na -agbada ụgbọ elu Boeing 737 MAX.
SpiceJet na -atụ anya ịmalite ọrụ Boeing 737 MAX n'ọnwa na -abịa.
India tufuo ụgbọ elu 737 MAX na Machị 13, 2019.
Onye na -ahụ maka njem ụgbọelu nke India kwupụtara taa na e kwere ka ụgbọ elu Boeing 737 MAX rụọ ọrụ na mbara ikuku India ọzọ.
Ụgbọ elu Boeing 737 MAX niile dara n'ụwa niile na Machị 2019 ka ihe mberede abụọ mere n'ime ọnwa ise.
India amachibidola ụgbọ elu MAX niile efega, si, n'ime na karịa ikuku ikuku India na Machị 13, 2019.
N'oge na -adịbeghị anya, ndị na -ahụ maka ụgbọ elu obodo na US, EU, UAE na mba ndị ọzọ kwere ka ụgbọ elu ndị a fechaa ọzọ - mgbe ha mechara mgbanwe nchekwa achọrọ yana nweta ngwaike na ngwanrọ achọrọ maka nchekwa.
SpiceJet Ltd nke India kwuru na Tọzdee na ọ na -atụ anya na ụgbọ elu Boeing 737 MAX nọ n'ụgbọ mmiri ya ga -alaghachi ọrụ na ngwụsị Septemba mgbe nkwekọrịta ya na obere onye ahịa Avolon kwụsịrị na mgbazinye ụgbọ elu ahụ.
SpiceJet - naanị ụgbọ elu India nke nwere B737 Max na India - batara na mmezi ya na Avolon, onye isi ụgbọ elu MAX, na -emeghe ụzọ maka ụgbọ elu 737 MAX ụgbọ elu ịmalite ịlaghachi ọrụ… na ngwụcha Septemba 2021, “isiokwu maka nkwado iwu. ”
Na mkpokọta, enwere ụgbọ elu Boeing iri na asatọ na India-nke bụbu Jet na 737 nke SpiceJet-n'oge mgbada.
Onye ọchụnta ego nke India bụ Rakesh Jhunjhunwala na-ezube ibido ụgbọ elu ụgbọ ala dị ọnụ ala na mbido afọ na-abịa na ụgbọ elu B737 Max. Ndị na-ere ego ebupụla Ex-Jet Max.
India General Directorate of Civil Aviation (DGCA) onye isi Arun Kumar nyere iwu kagbuo mbido March 2019 nke B737-8/9 MAX taa.
Kumar kwuru, "Mwepu a na-eme ka ọrụ ụgbọ elu Boeing Model 737-8 na Boeing Company Model 737-9 (MAX) nwee naanị afọ ojuju nke ihe achọrọ maka ịlaghachi ọrụ," Kumar kwuru.
Na mbido Eprel, DGCA ekwela ka ụgbọ elu Boeing 737 Max nke edebanyere aha na mba ofesi pụọ na mba ahụ. O nyekwara ohere ịfefefefefefego n'elu Max na mbara ikuku India.
N'ịgbaso nke a, ụfọdụ ụgbọ elu mba ofesi edebanyere aha kwụsịrị n'ọdụ ụgbọ elu dị iche iche na India nwere ike rụọ RTS.
Na nkwupụta, Boeing kwuru, sị: “Mkpebi DGCA bụ ihe dị mkpa dị mkpa iji weghachite 737 MAX n'enweghị nsogbu na India. Boeing na -arụkọ ọrụ na ndị na -ahụ maka njikwa na ndị ahịa anyị ka ha weghachi ụgbọ elu ahụ ka ọ rụọ ọrụ n'ụwa niile. "